RASMI: Real Madrid oo ku dhawaaqday inay dib u soo ceshatay Zidane, kadib markii ay shaqada ka ceyrisay Solari – Gool FM
(Real Madrid) 11 March 2019. Real Madrid ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in Zinedine Zidane uu dib ugu soo laabtay shaqada kooxda Los Blancos, isla markaan uu kooxda hogaamin doono laga bilaabo bari oo Talaado ah, kadib shir ay wada qaateen maamulka kooxda.
War rasmi ah ee kasoo baxay kooxda Real Madrid ayaa lagu sheegay:
“Guddiga maamulka kooxda ayaa go’aansaday maanta, in la kansalo heshiiska Santiago Solari”.
“Real Madrid waxay ka mahad celineysaa shaqada uu Solari ka qabtay kooxda iyo kalsoonidii uu u muujiyay gurigiisa”.
“Golaha ayaa sidoo kale ansixiyay magacaabista Zinedine Zidane isagoo ah macalinka cusub ee kooxda, si uu u sii wado kooxda ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedka, iyo heshiis gaaraya ilaa iyo June 30, 2022”.
Warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez uu kala soo muuqan doono Zinedine Zidane shir jaraa’id caawa saacada geeska afrika marka ay tahay 10:00. garoonka Santiago Bernabeu.